Ciidamo Booliis ah oo tababar la-dagaallanka argagixisannimada ku qaatay dalka Turkiga. - Latest News Updates
Ciidamo Booliis ah oo tababar la-dagaallanka argagixisannimada ku qaatay dalka Turkiga.
Kooxo boolis ah oo ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa tababar ku qaatay dalka Turkiga iyadoo waddanka Afrika uu ku dhex jiro weeraro argagixiso oo ay gaystaan kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab.
Dugsi sare oo loogu talagalay cutubyada taliska ciidamada Turkiga ee ku yaal magaalada galbeedka ee Foça, saraakiisha booliisku waxay barteen sida wax looga qabto halista argagixisada lix toddobaad usbuuc ah. Koorsadan, oo ay iska kaashadeen Hay’adda Iskaashiga iyo Xiriirinta Turkiga (TİKA) oo gargaar horumarineed siisa Soomaaliya iyo dalal kale, ayaa qayb ka ah heshiis dhex maray dowladaha Turkiga iyo Suudaan.
Waqtigaan, 10 sarkaal oo booliis ah ayaa saraakiisha Turkiga ay tababareen sida ay uga baaraan degaan meelaha la deggan yahay khatarta argagixisada iyo sidii looga takhalusi lahaa argagixisada aagaggaas, sida loo maareeyo miinooyinka iyo aaladaha qaraxyada guryaha laga sameeyo iyo sida looga jawaabayo weerarada. Waxay barteen noocyada waxyaabaha qarxa ee ay kala kulmaan howlgalada ka dhanka ah argagixisada iyo sida loo fuliyo weerarada argagixisada.
Lt. Önder Yıldız, oo ka mid ah tababarayaasha, ayaa u sheegay wakaaladda wararka Anadolu Agency (AA) in ardayda ay xamaasad iyo xiiso u qabaan inay wax bartaan. “Waxay diyaar u yihiin inay bartaan waxyaabo cusub waana ku faraxsanahay inaan awoodno inaan caawinno,” ayuu yidhi. Yıldız wuxuu intaas ku daray in saraakiisha Somaliyeed la siin doono shahaado si ay si sax ah uga jawaabaan halista argagixisada kadib markay dhameeyaan tababarka.
Abdurrahman Abdullah Muhammad, oo ah kormeere booliis Soomaali ah oo dhiganayay koorsada, ayaa sheegay inay ahayd tababar adag laakiin “runtii ah mid hufan.” Waxaan aragnay marti-gelinta Turkiga halkaan waxaanna ku barannay waxyaabo faa iido u leh dib-ugu-soo-kabashada Soomaaliya. Si aan u sheegno, waxay ahayd koorso aad noogu dhib badan waxaanan xasuustaa inaan lumiyay neefsashada mararka qaarkood markaan hirgalinayno wixii aan bartay. qolka qaladka oo wuxuu ahaa mid aad u macquul ah, “ayuu yidhi.